Kooxda Manchester City oo heshiis cusub la furanaysa Raheem Sterling – Gool FM
(Manchester) 15 Maajo 2021. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa la soo warinayaa inay wadahadallo heshiis kordhin ah la furanayso Raheem Sterling.
Kaddib todobaadyo la isla dhexmarayay in xiddigan garabka ka ciyaara laga yaabo inuu baxo xagaagan ayaa haddana sida muuqata xiriirka labada dhinac uu fiican yahay.
Manchester City ayaa haatan u furan inay qandaraas cusub siiso Raheem Sterling kaddib marka la soo gabagabeeyo tartanka Euro 2020, sida ay daabacday Jariiradda The Telegraph.
Sterling ayaa dhaliyey goolkii guulsha oo uu xulkiisu kaga adkaaday Croatia, isagoo 26 sano jirkaan weli sii wada qaab ciyaareedkiisa fiican, haatanna waxa ay Sky Blue doonaysaa inay ku abaal-mariso heshiis cusub.
Warar soo baxayay dhowaan ayaa sheegayay in xiddiga xulka qaranka England ee Sterling uu ka tagi karo garoonka Etihad, isla markaana uu ku sii jeedo kooxda Barcelona oo doonaysa saxiixiisa.
Waxaa la warinayey warar xan oo sheegayay inuusan Sterling ku jirin qorshayaasha Tababare Pep Guardiola, laakiin taasi waxaa laga yaabaa inay tahay sheeko xad dhaaf ah oo la buun-buuniyey, waxaana warbixinta lagu sheegay in laacibkan ay Man City qandaraaska cusub ka saxiixanayso marka uu soo dhammaado Koobka qarammada Yurub ee Euro 2020.